Tag: programa fahatokisana sms | Martech Zone
Tag: programa fahatokisana sms
SlickText: Inona avy ireo fiasa sy fahaiza-miombon'antoka amin'ny sehatra marketing SMS?
Talata, Desambra 8, 2020 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mieritreritra ny fandefasana hafatra an-tsoratra ho toy ny fahaizana mandefa hafatra an-tsoratra fotsiny amin'ny mpamandrika. Na izany aza, ny hafatra SMS sy MMS dia nivoatra nandritra ny taona maro. Ankoatry ny fepetra takiana amin'ny fanarahan-dalàna, ny sehatra marketing amin'ny hafatra an-tsoratra dia nivoatra be tamin'ny alàlan'ny fahafaha-misafidy, automatisation, segmentation, personalization, ary ny fahaizany mampiditra. SlickText dia sehatra fandefasan-kafatra an-tsoratra feno endri-javatra feno sy mafy orina ho an'ny orinasa fototra izay te-hanao lahatsoratra fotsiny dia manolotra ny rehetra